Iingcebiso: Ungaqala njani ukubhala inqaku- iGeofumadas
Agasti, 2010 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Wonke umntu ufuna ukubhala malunga nento ethile, isihloko sicacile kubo, ukuba kubhekiswa kubani na kwaye banethemba lokufezekisa ngesihloko kucacile. Kodwa le phobia iyababetha:
Ndiqala njani? Ndiyi-odola njani into endifuna ukuyithetha?
Nazi iindlela ezine ezibalulekileyo zento ekufuneka yenziwe phambi kokuba uqale ukuthayipha ngobubi; umyalelo awunandaba, kodwa elowo luxabisekileyo kwaye luyimfuneko.
Ukwenza umbhalo wesandla usebenziseke ngakumbi, nangona ngokuhamba kwexesha unokukwenziwa kwiprosesa yegama ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo.
1. Thatha uluhlu lweengqondo
Oku kudwelisa nje into esiyaziyo ngesihloko. Umzekelo, ukuba isihloko "Imouse ayisebenzi kakuhle", Sifanele sicacise izinto ezifana:
Kukho ibhola kunye namagundane e-optical.
Iigundane ze-pellet zizaliswe ngamafutha kunye ne-powder.
Iigundane ze-Optical zinenkinga ngombala obomvu okanye kwiindawo ezikhanyayo.
i-gummies phantsi kwe mouse imele iqokelele uthuli kwaye ikhusele ukuba ingene ngaphakathi.
Ngokufanelekileyo, kukuba kwisivakalisi esivulekileyo izihloko eziphambili ezigubungela umxholo, kuya kufuneka ujonge ukuba ziyafikeleleka kwaye zilula amabinzana awaziwayo akhoyo, izinto ezihlekisayo xa kufanelekile. Njengomzekelo:
Ukuba uyiSpanish kwaye uya eMelika ukuya kufundisa iiklasi zekhompyuter, ungaze uthi: "Bamba imouse ngokuqinileyo"
Kwakhona kunceda ukubuza imibuzo, ngokuqhelekileyo ukuyila umxholo:
Ziziphi izizathu ezibangela ukuba imouse ingcolile?
Ziziphi iingcebiso ezinganikwa ukukhusela ukungcola kwimouse?
Ngaba ndiquka kuphela amagundane e-analog?
Kufuneka i-mouse ithunyelwe nini kwinqwelo?
Indlela yokucoca imouse?
Abafundi bam bafuna ukwazi ngani ngesi sihloko?
Ingaba iboya okanye iplastiki yomdaka iphambili kangcono?
3. Nxulumanisa izimvo
Emva koko, kulula ukunika unxibelelwano kwimibono, ukuyila umxholo. Umzekelo:
Ukuba iyimouse ebonakalayo, ithola ingcolileyo kangako, ihlala ixesha elide, iyabiza.
Ukuba ibhola imouse, iya kuba yinto engcolileyo, ihlala kwindawo ephantsi.
Ukuhlambulula igrisi kunye nothuli, inokwenziwa ngesikhonkwane, kunye nekhanga elincinci.
Kufuneka uhlambulule ibhola, iintonga ezitshintshiweyo ngokusondeza kunye nendawo ejikelezayo, isondo elinesigxina, i-gummies yangaphandle, iyigubungele, yicime.
4. Fumana ngakumbi.
Ngomzobo okrwitshiweyo, isidingo sikhona sokuphanda ngakumbi, kwimiba efuna ubunzulu. Akukho mfuneko yokujonga ukuba kukho umntu othethe ngalo mbandela kuba oko kunokusosulela okanye kusidimaze. Okokugqibela sinokuphoxeka kwaye singabhali, kuba phantse yonke into sele kuthethwe ngayo, kodwa singacinga ukuba ayisoze iphinde ifane, xa sinokufumana omnye umbhali enesihloko esinye singakwandisa umxholo wayo kwaye sikucaphule njengesalathiso.
Uphando luya ngaphaya kokukhangela oko sele kushiwo, kufundwa into esingaziyo ngokuqinisekileyo, umzekelo:
Ithini i-wikipedia malunga nephedi yemouse, ukuba uyibhala njani ngeSpanish. Ngubani owasungula oko.
Xa ubhala ngevili, mhlawumbi unomdla wokuba uyazi ukuba zibizwa ntoni, indlela osebenza ngayo ngaphakathi.
Izizathu zokubangela ukuba umbala obomvu uthinte imouse ye-optical, njengoko ibizwa ngokuba yi-ray, ukuba ichaphazela amehlo.
Sifuna kwakhona imifanekiso embalwa, ngoko kuya kufuneka sitshekishe i-Google kwaye iya kusithatha ukuze sifunde ngakumbi.
Okokugqibela, kufuneka sibe nemibono ecacileyo malunga nendlela yokuqala ukubhala umzimba woxwebhu, nokuba sisincoko, umhleli okanye iposti yamagama angama-700. Ngokufanelekileyo, umxholo unokwenziwa ngamacandelo amafutshane, amanqaku amathathu okanye amane alandelelanayo; kwimeko yoxwebhu olude, iya kusinika umbono wetafile yemixholo enezahluko zayo eziphambili kunye namacandelo. Ke, okulandelayo emva koko kukuqala ukubhala ngokusekwe kwezi ngongoma, enye yazo inokuba sisiphelo, nangona inemilinganiselo ethile esiza kuyikhankanya kamva.
Ndihlangulwe kwikhosi yam yokubhala, eza kundithatha iiyure ezine ngaphezulu kwemivulo emininzi. IiGajes zezi kunye nolunye urhwebo olonwabisayo phantse njengokuthatha ikhosi ye-AutoCAD. Ayinamsebenzi nokuba ikwi-Intanethi okanye kwi-lectern apho iqela lababhali abatsha balindele ukuba kwiiveki ezintandathu babeke imigaqo esisiseko yokwenziwa kwayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukugqiba ngeMapServer
Post Next Ubukho ...Okulandelayo »
2 Iimpendulo "kwiingcebiso: Ungaqala njani ukubhala inqaku"
WayengumSpaniard owayerhabaxa phaya, kwaye uqeqesho lwalunikwa ngaphandle kwentlawulo. Ayisiyo ukuba lukhanyiso.
Impazamo, bendithetha ukuba kutheni umntu waseSpaniard esiya kunika ikhosi ikhompyutha eMelika? EMelika kukho abantu abalungiselelwe kakhulu ukuyenza. Umzekelo: IMexico neMelika ziikhompyuter ngakumbi kuneSpain.